> Resource > iPad > Sida loo Delete Photos ka iPad Camera Roll
Sidee baan u tirtirto sawiro ka Camera Roll on iPad aan iyaga laga badiyay ee albums? Tani waa si loo badbaadiyo meel iCloud. (Laga soo bilaabo Apple Support Communities)
Ma doonaysaa in aad caato ah hoos Camera Roll iPad in ay kaliya sii sawiro aad rabto? Hayso guuriyeen photos Roll Camera in album ah, oo hadda aad jeceshahay waxaa laga yaabaa in ay tirtirto, kuwaas oo sawiro oo u dhiganta in Roll Camera? Waxaa si sahlan hadda. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa in ay isticmaalaan barnaamij - Wondershare TunesGo (Windows) ama Wondershare TunesGo (Mac) .
Barnaamijku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad tirtirto photos iPad Camera Roll in Dufcaddii. Intaa waxaa dheer, haddii aad xoojiyaa kuwaas oo sawiro ku giringiriya Camera in album kale, ha ka welwelin. Barnaamijkan tirtiri doonaa oo kaliya photos ee ku giringiriya Camera, iyo sii kuwa album kale.
Download barnaamijkan in ay tirtirto Roll Camera ka iPad!
Sidee in ay tirtirto sawiro ka iPad Camera Roll
Qaybtan soo socota, waxaan idin tusin doonaa tallaabooyinka fudud in ay tirtirto sawiro laga gooynayaa way ka iPad Camera Roll waqti. Halkan, waxaan kaliya qaadan version Windows sida tusaale. The version Mac shaqaysaa si ka simialr.
Tallaabada 1. Daahfurka barnaamijka iyo Connect aad iPad in kombiyuutarka
Marka ugu horeysa, ku rakibi this iPad Camera Roll tirtirto qalab on your computer. Markaas, waxaa lagu daahfuri. Ka dib markii in, isticmaali cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPad la kombiyuutarka. Marka la ogaado, aad iPad lagu soo bandhigi doonaa furmo suuqa hoose.
Fiiro gaar ah: iPad Air, iPad 2, iPad mini, iPad, iPad bandhigay isha iyo The macruufka orodka New iPad 9/8/7/6/5 si buuxda taageeray.
Tallaabada 2. Roll Camera Delete on iPad
Bal eeg, files on your iPad ku muujisan yihiin galeeysid bidix. Si aad u saaro sawirada aad Camera Roll iPad, guji "Sawirro" tab. Markaas, waxaad ka heli suuqa kala maamulka sawir on xaq. Fur Roll Camera ah. Haddii aad rabto in aad gurmad ah ka hor inta tirtirka, waxaad riixi kartaa "Dhoofinta in ay" si ay u gudbiyaan sawiro iPad Camera Roll in kombiyuutarka .
Hadda, dooran photos in aad dooneyso in aad tirtirto. Markaas, guji "Delete". Inta lagu guda jiro geeddi-socodka, waxaa idinku waajib ah in aad iPad xiran la kombiyuutarka.
Waa hagaag, waa in aad si cad oo ku saabsan sida loo tirtiri sawir ka Roll Camera on iPad. Waa arrin fudud iyo effortless, soo maaha? Ka sokow Camera photos Roll, barnaamijkan waxtar leh oo aad siisaa awood ay uga masixi sawirada ee Photo Library sidoo.
Haddii aad tirtirto photos iPad Camera Roll ka hor taageerto kor, ha ka welwelin. Waxaad sameyn kartaa in aad soo kabashada lumay iPad Photos si fudud.
Hoos waxaa ku tutorial video ah. Fadlan hubi.
Hadda, download barnaamijkan u leedahay in isku day ah.